Mohamed Salah oo doonaya Kulamada ka harsan horyaalka inuu ku jabiyo Rikoor ay hore u sameeyeen Alan Shearer,Ronaldo iyo Suarez. | Gooldhalin
Mohamed Salah oo doonaya Kulamada ka harsan horyaalka inuu ku jabiyo Rikoor ay hore u sameeyeen Alan Shearer,Ronaldo iyo Suarez.
Iyadoo 29 gool uu dhaliyay Premier League xilli ciyaareedkan, xiddiga reer Masar Mohamed Salah ayaa diirada saaraya inuu rikoor kale sameeyo.
Mohamed Salah ayaa indhaha ku haya inuu jabiyo rikoorka gooldhalinta Premier League ee goolasha ugu badan hal xilli ciyaareed.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Masar Salah ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad loo jecleysta tan iyo markii uu ku soo laabtay horyaalka Ingariiska,isagoo ku yimid aduun lacageed gaaraya € 42million oo uu kaga soo dhaqaaqey Roma bishii July, isagoo u dhaliyay kooxda Reds 39 gool tartamada oo dhan.
Salah ayaa hogaaminaya gooldhalinta horyaalka Premier League isagoo le 29 gool, inkastoo weeraryahankaTottenham Harry Kane, oo ku guuleystay abaalmarinta Golden Boot mid kasta oo ka mid ah labadii xilli ciyaareed ee u danbeysay isaga oo dhalinayey 25 gool.
Alan Shearer, Cristiano Ronaldo iyo Luis Suarez ayaa wadaagay rikoorkii goolasha ugu badan ee horyaalka Premier League, seddexda ciyaaryahan ayaa dhaliyey 31 gool.
Salah ayaa hada waxaa u harsan shan kulan xilli ciyaareedkan, waxaana hanka uu ku doonayo inuu ku jabiyo rikoorkaas uu u bilaabanayaa kulanka Sabtida ee ay la leeyihiin Bournemouth, waxaana uu kalsooni ku qabaa ina jabin doono rikoorka u yaala Suarez, Ronaldo iyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan Premier League ee Shearer.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko nafsad ahaanteyda anigoo u dagalaamay si aan u jabiyo rikoorka Premier League” ayuu yiri Salah.
“Waxaan ka fekeraa kulan kasta, taas waa bartilmaameedkeyga, waxaan doonayaa inaan goolal dhaliyo, waxaan doonayaa inaan kooxda ka caawiyo guul kasta.
“Weli waxaan haystaa shan kulan oo aan ku sameyn karo wax kasta, waxaa jira fursad weyn, aan aragno wixii dhaca.
Salah ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku guuleysta abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League bishii seddex jeer hal xilli ciyaareed gudahiis ka dib markii uu dhaliyay lix gool afar kulan oo uu u ciyaaray bisha March, halka uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Liverpool lix jeer xilli ciyaareedkan.
“Waxaan dareemayaa wanaag in mar kale ku guuleysto abaalmarintaan,” ayuu yiri Salah.